TikTok Bots-ka ugu Fiican ee Suuqa
TikTok Bots-ka ugu Fiican ee Suuqa iyo sida loo ilaaliyo Koontadaada
3 maalmood tijaabo bilaash ah
Raac/Haba-socod automation-ka qaabka
Aad u ammaan ah oo leh wakiil ku dhex jira
Algorithm smart iyo xawaaraha degdega ah
Ma jiro tijaabo bilaash ah xilligan
Sida qaababka otomaatiga ah
Dejinta sugan laakiin ma jiro wakiil
Dejinta smart xitaa xirmada aasaasiga ah
Ma jiro tijaabo - $15 todobaadkii
Sida otomaatiga matoorka ah
Madal sugan laakiin ma jiro wakiil
Beegsiga smart iyo dejinta
Ma jiro tijaabo bilaash ah oo la heli karo
Raac/Ha raacin qaabka bot
Dejinta iyo taageerada horumarsan
Ma jiro tijaabo laakiin la awoodi karo $15 bishii
Automation ku salaysan Raac/La socosho/Like
Ma jiro wakiilo, si macquul ah loo hubo
Beegsi sax ah iyo waxqabad wanaagsan
Wax tijaabo ah ma jiro
Ma jiro wakiil laakiin madal aad u ammaan badan
Beegsiga smart iyo hagaajinta xawaaraha
Raac/Hala-soco/ Jeceshahay qaabka bot
Ma jiro habayn wakiil oo jira
TikTok waa madal warbaahinta bulshada ugu dambeysay oo aragtay kobac aan horay loo arag tan iyo markii la sii daayay Sebtember 2016.
Waxay ku kortay boodbood iyo xuduud waxayna noqotay mid ka mid ah tartamayaasha warbaahinta bulshada ee ugu sarreeya, iyo sabab wanaagsan.
TikTok waa nooc ka mid ah riyo suuqgeyneed, oo leh muddada fadhiga iyo heerka hawlgelinta ka mid ah kuwa ugu sarreeya oo dhan dhufto ee warbaahinta bulshada.
Sidaa darteed la yaab ma leh in hadda TikTok bots suuqa ku jiraan si ay u habeeyaan hawlo gaar ah., sida loo raaco, si loo eego, comment iyo like saar.
Waxaan rabnay inaan ogaano bots-yada la heli karo, sida ugu wanaagsan ee ay u shaqaynayaan iyo haddii ay mudan yihiin in ay ka fiirsadaan dadka saamaynta ku leh iyo suuqgeynayaasha.
Bots TikTok ugu weyn
Waxaan dib u eegnay 7 ka mid ah TikTok Bots-ka ugu caansan ee maanta la heli karo:
Tik Tok Bot - TikTok Bot-ka ugu fiican suuqa, #1 fog.
TikTool – Kobac wanaagsan, lagu kalsoonaan karo, oo leh astaamo caqli badan – #2.
TokUpgrade – Ku rakib oo illow – n°3
Jeffrey – Madal wanaagsan oo falanqayn wanaagsan leh – n°4.
Instamb - Hab fudud oo si fiican u shaqeeya – n°5.
Kobaca Tok - Way ku fiican yihiin kuwa bilawga ah laakiin maaha sida diirada loo saaro – n°6.
Vire - Automation gaabis ah marka loo eego adeegyada kale – n°7.
TikTokBot.io Waxay kaa caawinaysaa inaad kor ugu qaaddo akoonkaaga iyada oo loo marayo ka-qaybgal otomaatig ah oo waxay awood u leedahay inuu kuu keeno kumanaan taageerayaal ah iyadoo ku xidhan inta uu botku socdo.
Waxaan wadnay TikTokBot dhowr toddobaad waxaana la dhacay tayada sifooyinka iyo natiijooyinka.
Rakibaadda ayaa ahayd mid degdeg ah oo fudud, waxaana jira astaamo badan oo aad ku ciyaari karto oo aad ku hagaajin karto otomaatiga.
Qiimo – $$ – $29.90/m
Astaamaha – 4/5 – Raac/Ha raacin Automation-ka oo leh xulashooyin badan oo la beegsanayo, algorithm smart iyo falanqaynta.
Amniga – 4.5/5 – Xidhiidh sugan iyo wakiil mobilada ayaa lagu daray.
Gargaarka – 4.5/5 – Taageerada macaamiisha Premium si ay kaaga caawiso safarkaaga.
Ogow – 4.5/5 – Waa tan ugu wanaagsan dhammaan dhinacyada waxaanan si gaar ah u jeclayn fududaynta isticmaalka iyo diiradda saaraya amniga..
TikTool isticmaala habka Raac/Unfollow otomaatigga ah oo leh dhowr astaamood oo dheeri ah.
Aaladaha soo jeedinta smart iyo helha hashtag-ga waxay siinayaan gees yar tartanka.
Qiimaha ikhtiyaarka aasaasiga ah waa mid aad u sarreeya, kan adeega premium, dhaqso badan oo ka sarreeya, waa ka sarreeyaa.
Qiimo – $$ – $29 p/m
Astaamaha – 4.5/5 – Tilmaamo heer sare ah, oo ay ku jiraan hashtagyo caqli badan iyo talooyin.
Amniga – 4/5 – Madal sugan laakiin majiro doorashooyin wakiil ah oo ku dhex dhisan.
Gargaarka – 3.5/5 – Taageerada aasaasiga ah ilaa aad dooratid adeega premium oo ah labanlaab qiimaha.
Ogow – 4/5 – Madal aad u wanaagsan laakiin ma jiro wax wakiil ah oo hoos u dhigaya.
Kor u qaad ammaan badan helay, markaa waxay ahayd inaan tijaabino.
Waxay leeyihiin laba qorshe oo ay ku bilaabaan – caadiga ah iyo pro.
Labada xaaladoodba, waxaad helaysaa maamule xisaabeed u go'ay iyo taageero buuxda.
Qiimo – $$$ – $60-100 p/m
Astaamaha – 3.5/5 – Shaandhayn weyn laakiin beegsiga ku salaysan kaliya xisaabaadka.
Amniga – 3.5/5 – Meel ammaan ah laakiin way fiicnaan lahayd inaad aragto wakiil.
Gargaarka – 4/5 – Maamulaha xisaabaadka ayaa lagu daray.
Ogow – 3.5/5 – Adeeg hufan laakiin waxa uu u baahan yahay ilaalin dheeraad ah bartan qiimaha.
Jeffery waa magaca TikTok bot weyn.
Heerka raac/la socoshada otomaatiga si aad u bilowdo keenista kuwa raacsan.
Waxay leeyihiin laba qorshe oo lacag ah – Wuxuu bilaabay ganacsi, taas oo soo saarta wadarta xiddigiska ee 349,$99 bishii.
Ilaa hadda, Warbixinadu aad ayay u wanagsanayen waxayna heleen dib u eegisyo badan oo wanaagsan.
Qiimo – $$$ – $49.99 p/m
Astaamaha – 4/5 – Beegsiga, stats smart iyo settings ayaa bixiya fududeynta isticmaalka.
Amniga – 4/5 – Madal sugan iyo wakiil gaar ah ayaa lagu daray.
Gargaarka – 4/5 – 24 saac taageerada macaamiisha, 7 maalmood 7.
Ogow – 4/5 – Automation weyn oo sax ah dhammaan sanduuqyada, xoogaa ka qaalisan.
Instamb La bot TikTok, oo la mid ah Auto Tokker, waxay kuu ogolaanaysaa inaad hesho jecel iyo taageere toos ah, kuwaas oo dhamaantood ku salaysan username iyo hashtag.
Way ka jaban tahay, laakiin si kastaba ha ahaatee waxay bixisaa madal wanaagsan oo lagu kobciyo TikTok.
Waxay ku taal dhamaadka jaban ee cabirka laakiin wali waxay siisaa madal wanaagsan oo lagu kobciyo TikTok.
Qiimo – $ – $15 p/m
Astaamaha – 3.5/5 – Magaca isticmaale ee caadiga ah iyo bartilmaameedsiga hashtag.
Amniga – Instagram News Automation/5 – Xidhiidh sugan laakiin ma jiro doorashooyin wakiil.
Gargaarka – 3.5/5 – Taageerada khadka tooska ah.
Ogow – 3.5/5 – Adeeg toos ah oo wanaagsan, laakiin waxay u baahan tahay wakiil.
Kobaca Tok waa adeeg hufan oo bixiya astaamo wanaagsan.
Waxa uu qaatay habka caadiga ah oo ka kooban soo jeedinta 2 qaacido, Bilawga iyo Pro.
Pro wuxuu ku siinayaa dejin aad u wanaagsan, laakiin qiimo sare.
Astaamaha – 3.5/5 – Hashtag oo lagu beegsanayo kaliya qorshaha Bilowga.
Amniga – Instagram News Automation/5 – Meel ammaan ah laakiin ma jiraan doorashooyin wakiil.
Gargaarka – 3/5 – Taageero la'aan.
Ogow – Instagram News Automation/5 – Ma xuma, laakiin qiimaha, way fiicnaan kartaa.
Vire xayaysiis badan ayaa dhawaanahan helay, laakiin ma hubno in tani ay xaq tahay.
Dhammaan goobaha aan dib u eegnay, waa kan u muuqda inuu yahay kan ugu qaalisan ee leh sifooyinka ugu yar.
Si kastaba ha ahaatee, waxay bixisaa maamul xisaabeed dhamaystiran, taasoo laga yaabo inay soo jiidato dadka qaar.
Qiimo – $$$ – $100 p/m
Astaamaha – 3/5 – Bartilmaameedka Hashtag iyo qaar ka mid ah sifooyinka kale.
Amniga – Instagram News Automation/5 – Ma jiraan wax caddaynaya in ay ku habboon yihiin wakiil.
Gargaarka – 4/5 – Maareeyayaasha Xisaabaadka iyo Taageerada khadka tooska ah.
Ogow – Instagram News Automation/5 – Waxaa murugo leh kuma noolaado buunbuuninta.
Sida Looga Ilaaliyo Koontadaada Tik Tok ee mamnuucida ?
Baraha bulshada ayaa la mamnuucay in muddo ah waxayna halkan u joogtaa sababo wanaagsan.
Waxay ka hortagaan isticmaalayaasha inay ku xad-gudbaan xadka si ay u sii wataan koritaankooda, Taas oo mararka qaarkood ku adkeyn karta in aad taageerto.
Xaduudahan ayaa had iyo jeer jiri doona, Markaa waxa ugu fiican ee aad samayn karto si aad u ilaaliso akoonkaaga TikTok waa inaad isticmaasho a mobile wakiil.
Wakiilka mobilada macnaheedu waa xidhiidhkaaga TikTok wuxuu la mid yahay browserka mobaylka, Taas oo hubinaysa in dhibcaha kalsoonidaada aysan saameyn doonin haddii aad dhaafto xadka.
Waxaa muhiim ah in la xasuusto in xannibaadda iyo in la mamnuuco ay yihiin laba shay oo kala duwan., comme indiqué ci-dessous:
Balooggu wuxuu caadi ahaan ka dhigan yahay in lagaa hor istaagay inaad samayso ficillo
Xayiraadda ayaa la soo saarayaa marka akoonkaaga si ku meel gaar ah ama si joogto ah looga saaro adeegga.
Waa maxay sababta akoonkaaga TikTok u xidhan yahay ?
Koontadaada TikTok waxaa loo xannibi karaa sababo kala duwan.
Tani waxay badanaa dhacdaa marka:
Dad badan ayaad si degdeg ah ula socotaa
Waxaad jeceshahay qoraallo badan
Aad baad u badan tahay faallooyinka
Faallooyinkaagu waa kuwo been abuur ah
Waxaad dhejisaa wax ka soo horjeeda hab-raaca bulshada
Haddii aad raacdo tilmaamaha beesha TikTok oo ha soo dhigin wax fisqi ah, waxaa laga yaabaa inaadan wax dhibaato ah kala kulmi doonin.
Maxay yihiin sababaha ugu waaweyn ee akoonkaaga loo xannibay ?
“Ka qayb qaadashada nuxurka cagajuglaynta internetka, kadeedis ama hadal nacayb ama kicin nacayb ka dhan ah shaqsi ama koox dad ah jinsigooda dartiis, isirkooda, diintooda, dhalasho ahaan, dhaqankooda, naafonimadooda, ee jihada galmoodkooda, jinsigooda, aqoonsiga galmoodkooda, da'dooda ama takoor kasta oo kale waxay keeni kartaa mamnuucid” iyadoo la raacayo tilmaamaha bulshada.
Qoraallo qaawan – Tani waa sabab cad iyo mid dad badan u keentay dhibaatooyin Instagram. Ma jiro shirkad bulsho oo doonaysa inay qaawanaan madalkooda, gaar ahaan mid loogu talagalay dhagaystayaasha da'da yar. Waa talo wanaagsan in dhammaan muuqaalada la nadiifiyo.
Ku dhaji fariimaha ku saabsan qoryaha ama daroogada sharci darrada ah – Qoraal kasta oo ku saabsan qoryaha ama daroogada ayaa ka soo horjeeda hab-raaca bulshada waxaana laga yaabaa in lagu soo rogo mamnuucid dheer.
Daabacaada nuxurka xuquuqda daabacaada – Waxaa lagu talinayaa inaadan dib u isticmaalin macluumaadka xuquuqda daabacan ee ku jira fiidiyowyadaada TikTok. Abuuritaanka si cad oo muuqaal ah isticmaalayaasha kale ee caanka ah waxay keeni kartaa mamnuucid qarsoodi ah.
Intee in le'eg ayay mamnuucida TikTok soconaysaa ?
Muddada ugu badan ee mamnuuciddu waa ku dhawaad ​​14 maalmood.
Si kastaba ha ahaatee, haddii aad si joogto ah ugu xad gudubto hab-raaca bulshada, waxaa laga yaabaa inaad u qalanto mamnuucid dheer oo aan xad lahayn.
Sida loola tacaalo Xayiraadda Qarsoon ?
Waad sugi kartaa haddii akoonkaaga uu caan yahay. Waxa kale oo aad samayn kartaa akoon cusub oo Tik Tok ah.
Isticmaalayaasha qaarkood waxay sheegaan in ciwaankooda IP-ga gabi ahaanba la xannibay, marka sida kaliya ee lagu hagaajin karo waa in la beddelo cinwaankaaga IP.
Maqaal horeWaa maxay Bots Instagram-ka ugu fiican 2020 iyo sida loo ilaaliyo akoonkaaga?
Maqaalka XigaReels Instagram : Jawaabta Instagram ee TikTok